आइतबार, फागुन २, २०७७ बागेश्वरी पोस्ट
प्रहरी संगठनको पहिलो कर्तव्य हो, मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु र जनताको जीउधनको रक्षा गर्नु । ‘सत्य सेवा सुरक्षनम्’ को मूलमन्त्र बोकेर प्रहरीले देश र नागरिकको सेवा गर्दै आएका छन् । कञ्चनपुरमा आपराधिक घटना बेला बेला हुँदै आएको छ । हत्या, हिंसा जस्ता घटना भइरहेका छन् । कञ्चनपुरमा निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भएको अढाइ वर्ष भइसकेको छ । तर, प्रहरीले उनको दोषीलाई अझैसम्म पत्ता लगाउन सकेको छैन । निर्मला हत्या प्रकरणको अनुसन्धान, अपराध नियन्त्रण, अमनचयन तथा सुरक्षा कायमका लागि कञ्चनपुर प्रहरीले प्रयास गर्दै आएको छ । यसै विषयमा आधारित भएर जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक अमरबहादुर थापासंग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
सुरक्षाको दृष्टिकोणले कञ्चनपुरको अवस्था कस्तो छ ?
कञ्चनपुर जिल्ला भनेको सुदूरपश्च्मि प्रदेशको तराईको जिल्ला जुन भारत सँग १३० किलोमिटर खुल्ला सिमाना भएको जिल्ला हो । यस जिल्लामा प्रहरीको सङ्ख्या हेर्ने हो भने सात सय बढीको सङ्ख्यामा प्रहरी कर्मचारी खटिदैं आएका छन् । पूर्वमा गुलरिया नाका छ भने पश्चिम क्षेत्रमा गड्डाचौकी रहेको अवस्था छ ।
यस्तै दक्षिणमा पुनर्वास नगरपालिकाको गौरीफन्टा नाका रहेको छ भने उत्तरमा चुरे क्षेत्र रहेको छ । विभिन्न नाकामा गरि जिल्लाभरि ४० ओटा प्रहरी युनिट रहेका छन् । जिल्ला भरी खटिएको प्रहरी युनिट मध्येबाट जिल्ला मातहतका प्रहरी चौकी लगायत विभिन्न युनिटहरुले दैनिक रुपमा शान्ति सुरक्षासँगै अपराध नियन्त्रण पनि गर्दै आएका छन् । प्रहरी कार्यालयको लक्ष्य अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पनि दैनिक रुपमा आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्नको लागि विभिन्न योजना अनुसार अगाडि बढिरहेको छ । दैनिक खटिएको युनिटले दैनिक रुपमा घटेका घटनाहरुको अनुसन्धान गर्ने तथा घटित घटनाहरुको निश्चित जाँचबुझ पनि नियमित रुपमा गर्दै आएको छ । जिल्लागत रुपमा अपराधको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अरु अपराधमध्ये पनि आत्महत्या गर्ने तथा विष सेवन गर्ने जस्ता घटना बढी घटेको देखिन्छ ।
आत्महत्या गर्ने मानिसहरुको सङ्ख्या यस वर्षको हालसम्म ६२ ओटा रहेको छन् भने विष सेवन गर्ने मानिसहरुको सङ्ख्या ४८ ओटा रहेको छ । योसँगै प्राप्त आकडा अनुसार जिल्लामा विभिन्न अपराध मध्ये हिंसा जन्य अपराध बढी हुने गरेको अवस्था छ । कोरोना महामारीले थला परेको विश्वको अर्थतन्त्रसँगै नेपाली अर्थतन्त्र पनि नराम्ररी प्रभावित भयो जस कारण धेरै मानिसले रोजगारी गुमाएपछि अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भए ।
अहिले केही अवस्था सामान्य भएको छ । अवस्था सामान्य भएपछि पनि धेरै मानिसहरु पूर्ववत रुपमा फर्किन पाएको अवस्था छैन । बेरोजगारीले गर्दा घरेलु हिंसा, महिला हिंसा लगायत विभिन्न हिंसामा पर्ने मानिसहरुको सङ्ख्यामा बृद्धि भएको पाइन्छ ।
प्रहरी भनेको समाजसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको संगठन हो । तसर्थ प्रहरीसँग नागरिकका विभिन्न अपेक्षा पनि हुन्छन् । यसरी समाजमा जाँदा वा समाजसँग प्रत्यक्ष रुपमा सहकार्य गर्दा सहज वा असहज के हुन्छ ?
पक्कै पनि हो । जुनसुकै घटना पनि सर्वप्रथम रुपमा समाजसँगै नै सम्बन्धित हुन्छ । समाजमा घटेका उक्त घटना देख्ने मानिस पनि समाजमै हुन्छ । यसले गर्दा अपराध गर्ने अपराधीको र अपराध सम्बन्धी अपराध देख्ने मानिसले आवाज उठाइदिनु पर्ने हुन्छ । जहिले सम्म अपराध देख्ने मानिसले अपराधको विरोध गर्दैन तबसम्म अपराध पत्ता लगाउन पनि निकै गाह्रो हुने गर्दछ । तथापि, जुन भनौ न अपराध घटिसकेपछि अपराधीलाई तुरुन्त नियन्त्रण गर्ने भन्ने समाजकको मनसाय हुन्छ ।
त्यसैले नागरिकहरुले प्रहरीसँग सहकार्य गनुपर्ने हुन्छ । प्रहरी र नागरिकबीच सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्दछ । जसले गर्दा अनुसन्धान गर्न चाँडो हुन्छ । पछिल्लो समयमा जनता पनि सुसुजित भएका छन् र घटना प्रहरी सामु आउनलाई प्रमाण जुटाउन पनि केही सहज भइरहेको छ ।
प्रहरी मेरो साथी जस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिता एकदमै कम हुँदै गएको छ । यस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन कस्ता योजना अगाडि सार्न आवश्यक छ ?
कञ्चनपुर जिल्ला भारतसँग सीमा जोडिएको जिल्ला भएकोले पनि देशभरीका मानिसहरुको आवतजावत हुने भएकाले जिल्लामा अपराधिक क्रियाकलाप पनि बढी हुने गर्दछ । जसले गर्दा अपराध नियन्त्रण गर्नको लागि प्रहरीलाई पनि चुनौती हुने गर्दछ । जस्तो मैले अगाडि पनि कुरा गरे जिल्ला भरिमा सात सय बढी प्रहरी कर्मचारी खटाइएका छन् ।
सोही मुताविक अनुसन्धानका कार्यहरु गरिएको हुन्छ । प्रहरी मेरो साथी भन्ने जसम्म्म समाजले बुझ्दैन तबसम्म प्रहरी कार्यक्रमले बोकेको उद्देश्य हासिल गर्न तथा प्रहरी मेरो साथी जस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिता कम हुने गर्दछ । समाजलाई कानून सम्बन्धी ज्ञान नभएका कारण जुनुसुकै समाजका मानिसहरु प्रहरी समक्ष आउन असजिलो महसुस गर्ने गर्दछन् । प्रहरी र समाजसँग सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्ने भएतापनि मानिसहरु प्रहरीसँग टाढा भएर बस्न चाहने गर्दछन् । तर पनि गैरकानूनी क्रियाकलाप विरुद्ध बलियो भएर लागेको अवस्था छ । यस्तै प्रहरी मेरो। साथी जस्ता कार्यक्रमसँगै विभिन्न जनचेतनाका कार्यक्रम पनि पछिल्लो समयमा जिल्लाको हकमा प्राथमिकतामा राखिएको अवगत गराउन चाहन्छु ।
जनचेतना कार्यक्रमकै शिलशिलामा भन्ने हो भने जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र बेल्डाडी क्षेत्रमा यस्तै गरेर शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको झलारी क्षेत्रमा र दोधरा चाँदनी सँगै सदरमुकाम क्षेत्रमा निरन्तरता साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौ । जसमा सामुदायिक प्रहरी, हातोमैलो कार्यक्रम, प्रहरी मेरो सााथी जस्ता कार्यक्रम हामीले विद्यालय स्तरमा सञ्चालन गरिरहेका छौ । यस्तै तत्कालको समय सापेक्ष हेरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जिल्ला स्तरीय समिति गठन गर्दै हिसांत्मक कार्यहरुलाई रोक्नको लागि सुरक्षित चेली अभियान सञ्चालन गर्ने योजनामा लागेका छौ ।
निर्मला हत्या प्रकरणकको लामो समय बितिसकेको अवस्था छ । घटनाको अवस्थाबारे बुझदा प्रहरी तर्फबाट अनुसन्धानको दायरामै छ भन्ने जवाफ आउँछ । कहाँसम्म पुग्यो निर्मला घटनाको अनुसन्धान ?
समाज भएपनि सममाजममा स्वतः घटना घटेकै हुन्छन् । समाजमा घटेका घटनाहरुको प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै दोषीलाई कारवाही गर्ने र पीडित पक्षलाई न्याय दिलाउने एउटा पाटो हुने गर्दछ । प्रहरी भनेको राज्यको कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो । प्रहरीले सानो ठूलो जुनसुकै घटनामा पनि अनुसन्धान गर्नुपर्दछ । जस्तो विगतको निर्मला पन्तको घटना जोड्नु भयो यसको विषयमा अनुसन्धानको दायरा लामो भएपनि निरन्तर अनुसन्धान भईरहेको जानकारी दिन चाहन्छु ।
हामी चाँडो अनुसन्धानको प्रक्रियालाई निश्चित रुपमा पूरा गर्ने हाम्रो लक्ष्य पनि रहेको छ । अनुसन्धान सुरुवाति चरणमा विभिन्न आन्दोलन लगायतका कार्यक्रम पनि भए जसले गर्दा अनुसन्धानमा पनि ढिलासुस्ती हुन गयो । देशव्यापी सामाजिक मुद्दा बनेको उक्त घटनाको दोषी पत्ता लगाउनको लागि हामी अनुसन्धानको क्रममा छौ । निश्चित रुपमा अनुसन्धान गरेर केही समयभित्रै घटनाको अन्तिममा पुग्ने प्रयास गर्न सफल हुन्छौ भन्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ ।
कञ्चनपुर भारतसंग जोडिएको जिल्ला पनि हो । जिल्लामा पछिल्लो समयमा चोरी तस्करी तथा मानव बेचबिखन जस्ता अपराधका घटना बढेका छन् । अपराध नियन्त्रणमा प्रहरीले के कसरी काम गरिहेको छ ?
सही भन्नुभयो । वास्तवमा कञ्चनपुर जिल्लाको अधिकांश भुभाग भारतीय सीमा क्षेत्रसँग जोडिएको छ । सीमासँग जोडिएको जिल्ला भएकोले पनि निश्चित रुपममा अपराध पनि बढि हुने गर्दछन् । यस्ता खाले विभिन्न अपराध नियन्त्रण गर्न प्रहरीले सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन गर्ने गरेको छ । सादा प्रहरी परिचालन गर्दा सीमा क्षेत्रमा हुने अपराधमा पनि धेरै कमी आएको छ । विषेश गरी सीमाक्षेत्रबाट आयात हुने लागुऔषध लगायतका आयातित लागुपर्दाथ तथा लागुऔषधलाई नियन्त्रण गर्नलाई प्रहरी कार्यालयले विभिन्न योजनालाई अंगिकार गरेर काम अगाडि बढाइरहेको छ ।
यस्ता विभिन्न योजनालाई अगाडि सारेर जाँदा अपराध नियन्त्रणममा प्रहरीलाई सफलता मिलेको पनि छ । अहिलेको अवस्था भनेको कोरोना महामारीको अवस्था भएकोले सीमाक्षेत्र पुर्वतह रुपमा स्वतन्त्र रुपले सीमाक्षेत्रमा आवातजावत गर्ने अवस्था भने छैन । यसले गर्दा लागुऔषध आयात गर्ने बाटो अलि साँघुरो भएपनि प्रहरीले नियन्त्रण गर्नको लागि थप सक्रियता बढाएको छ । चुनौतीको विषय हेर्दा लागु पदार्थ आयातसँगै विभिन्न प्रलोभन देखाई महिला तथा छोरीहरु बेचबिखनकका मुद्दापनि बढेका छन् । जसको नियन्त्रणको लागि विभिन्न संघसस्थासँग सहकार्य गरेर प्रहरी अगाडि बढेको अवस्था छ । सीमा क्षेत्रबाट विभिन्न लागुपर्दाथ आयात भएको अवस्था भन्ने हो भने प्रहरीले विगतको तुलनामा सफलता हात पारेको छ । यस्तै क्रममा प्रहरीले सीमा क्षेत्रमा खैरो हिरोइन, ब्राउन सुगर, चरेश, एमपोल, नाइट्राभेट लगायतका लागुपर्दाथ ओसार पसार गर्ने तथा सेवन गर्ने विभिन्न मानिसलाई प्रकाउ पनि गरेको अवस्था छ ।
सीमा क्षेत्रमा प्रहरीलाई झुक्याएर विभिन्न विभिन्न बहानामा लागुपर्दाथ आयाात तथा ओसारपसार गर्ने गरिएको सुनिनमा आएपनि त्यसलाई निश्तेज पार्नको लागि कञ्चनपुर प्रहरी चौबिसै घण्टा लागिपरेको अवस्था छ । सीमा क्षेत्रबाट लागुपर्दाथ एकदमै बढी मात्रामा ओसार हुने गर्दछ । लागुपर्दाथ बढी ओसारपसार हुँदा सीमानाका क्षेत्रमा अपराधिक घटनामा पनि बृद्धि हुने गर्दछ । लागु पदार्थ ओसारपसार गर्ने विरुद्ध प्रहरीले विभिन्न कारवाही पनि गरेको अवस्था छ । जिल्लाको हकमा भन्ने हो भने आर्थिक वर्षको हालसम्मको विवरण हेर्दाखेरी प्रहरीले लागुऔषध सम्बन्धी कसुर गरेका ४४ मुद्धा दायरा पनि गरेको छ । यस्तै प्रहरीले पछिल्लो समयमा जिल्लामा घट्ने अपराधमा पनि कमी ल्याएको छ ।
जिल्लामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि अहिलेसम्म अपराधमा निकै कमी आएको छ । यो सँगै हामीले फैसलापछि फरार भएका ७९ अभियुक्त पनि प्रक्राउ गरेर ठूलो सफलता हाँसिल गरेको छ ।
बर्दी लगाइसकेपछि सामान्य जीवनभन्दा प्रहरी जीवनमा कति र कस्तो चुनौती तथा कठिनाई हुन्छ । यसमा तपाईकको अनुभव कस्तो रहेको छ ?
प्रहरी भनेको समाजको लागि काम गर्ने एउटा जिम्मेवार सस्था हो । यसले मानिसको जिवनमा जन्मदेखि मृत्यु सम्म सम्बन्ध राख्ने गर्दछ । सामाजिक रुपमा प्रहरी अपहेलित भएपनि समाजका मानिसहरुको समाजका लागि निस्वार्थ काम गर्ने तथा कानूनको पालना गर्ने एउटा निष्ठावान संगठनभित्र प्रहरी पर्ने गर्दछ ।
अव यसमा व्यक्तिगत रुपमा भन्ने हो भने बर्दी लगाएर सामाजिक काममार्फत देशको सेवा गर्ने एउटा अवसर पनि हो । जसमा मैले काम गर्ने अवसर पा्रप्त गर्दा आफूलाई गर्व महसुस गर्दछु । खासमा प्रहरी भनेको कानून सम्बत पक्ष विपक्ष नहेरेर निश्पक्ष रुपमा काम गर्ने तथा सत्यप्रति बोध गराउने काम प्रहरीले गर्दछ । पश्चिमटुडेबाट ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन २, २०७७, १५:५६:००